ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: BAT File Format Lesson 4
BAT File Format Lesson 4
ကျနော် ဒီတစ်ခေါက် ပြောပြပေးမှာကတော့ For Loop အကြောင်းဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့် နည်းနည်း မြင့်လာပြီဖြစ်လို့ သေချာလေး လိုက်လုပ်ကြည့်စေချင်တယ်။ ၁ခေါက်နဲ့ နားမလည်ရင် အနည်းဆုံး ၂ ခေါက်လောက်ဖတ်ပေးပါ။ ကျနော်ရေးထားတာ နားမလည်ရင်တော့ ကျနော့်ကို ပြန်မေးပါ။ ဖြေပေးပါ့မယ်။ ဒါဆို ကျနော်တို့ For Loop အကြောင်းလေး စလိုက်ရအောင်
သူ့ကို ရေးမယ်ဆိုရင် ရေးပုံရေးနည်းကတော့
For Loop ရဲ့ Syntax ကိုတွေ့လို့ စိတ်မညစ်သွားပါနဲ့။ ကျနော် အတတ်နိုင်ဆုံး နားလည်လွယ်အောင်ရေးပေးပါ့မယ်။
ကျနော့် တုန်းက ဆိုရင် ဒီ Looping အပိုင်းလည်း ရောက်ရော သင်ပေးမယ့်သူလည်း မရှိ ၊ Google မှာရှာတော့ လည်း အပြည့်အစုံမရနဲ့ တော်တော် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာ။ အခုတော့ ကျနော်လည်း နားလည်သင့်သလောက် နားလည် ခဲ့ပြီးပြီမို့ မှတ်မိသလောက် ပြန်လည်မျှဝေတာပါ။
အစ်ကို တို့ ဒီအပိုင်းမှာ ဖတ်ရတာ နားမလည်တော့ လို့ စိတ်ညစ်ပြီးတော့ Bat ကို မလေ့လာတော့တာ မျိုးတော့ မလုပ်ပါနဲ့ လို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ကျနော့်တုန်းကလည်း အဲလို စိတ်မျိုးဖြစ်ဖူးလို့ပါ။ နားမလည်ရင် ကျနော့်ကို မေးပါ။ ကျနော်မသိရင်လည်း ကျနော့်ထက်တော်တဲ့ တတ်တဲ့သူတွေကို ပြန်မေးပေးပါ့မယ်။
အတတ်နိုင်ဆုံး နားလည်အောင်ရေးပေးမှာ ဖြစ်လို့ သေချာလိုက်လုပ်ပေးပါ။
ကဲဒါဆိုရင် ကျနော့် ရေးနည်း ထုံးစံအတိုင်း အောက်က ဥပမာလေးနဲ့ စလိုက်ရအောင်
for %%A in (abc,def,xyz) do echo %%A
အဲဒါလေးရဲ့ Code တွေကို ရှင်းပြပါ့မယ်။ cls ကတော့ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
For Loop ထဲမှာ Variable တစ်ခုဖြစ်တဲ့ %%A ကို ကြေငြာပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ထဲကို မတူညီတဲ့ Value တွေကို (abc,def,xyz) ဆိုပြီတော့ ကွင်းထဲမှာကြိုထည့်ထားပါတယ်။ အဲဒီ့ ကွင်းထဲကကောင်တွေကို တော့ predefined set value လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒါက Looping တစ်ခါပတ်တိုင်း တစ်ခါသတ်မှတ်ထားမှာပါ။
နောက်ဆုံးက echo %%A ဆိုတာနဲ့ For Loop က Variable ရဲ့ တန်ဖိုးကို အသစ်ပြောင်းထည့်ပါတယ်။
%%A ဆိုတာကတော့ Variable တစ်ခုဖြစ်ပြီး သူက Looping တစ်ခါပတ်တိုင်း မတူညီတဲ့ Values တွေ ကို predefined set ထဲက တန်ဖိုးတွေနဲ့ လက်ခံပါတယ်။
0 ကနေ9ကလွဲရင် %% နောက်မှာ ကြိုက်တဲ့ character တစ်လုံးစီကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
IN(abc,def,xyz) ဆိုတာကတော့ For Loop လုပ်ဆောင်မယ့် list တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ Program က Looping တစ်ခါပတ်တိုင်းမှာ Variable ဖြစ်တဲ့ %%A ထဲကို () ကနေ အမျိုးမျိုးသော တန်ဖိုးတွေထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
() ထဲက တန်ဖိုးတွေကို တော့ comma,colon တွေနဲ့ space bar စတာတွေနဲ့ ပိုင်းခြားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
() ထဲက တန်ဖိုးမကုန်မချင်း For Loop ကအလုပ်လုပ်နေစေပါတယ်။
DO ကတော့ Looping တစ်ခါပတ် တိုင်း ဘာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာပြောတာပါ။
ခုနက ကျနော်တို့ ရေးခဲ့တဲ့ Program မှာဆိုရင်တော့ ECHO %%A နဲ့ အဖြေကို ရိုက်ထုတ်ထားပါတယ်။
ထိုသို့ ရိုက်ထုတ်ထားချင်းအားဖြင့် Loop တစ်ခါပတ်တိုင်း abc ဆိုတဲ့ Variable A ထဲက တန်ဖိုးကို Looping အတွက် Do သုံးပြီး Echo နဲ့ အဖြေကို User ကို ပြသပေးပါတယ်။
ကျနော် စာနဲ့ ပြောတာ နားမလည်ရင် ခုနက Program ကို Run ပြီးတော့ ကြည့်လိုက်ပါ။ အောက်ကပေးထားတဲ့ အဖြေအတိုင်းရပါလိမ့်မယ်။
အဲလို တစ်ခုချင်းစီ Looping အတိုင်းထွက်လာမှာပါ။ Loop ၃ ခါပတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဖြေကို do နဲ့ echo သုံးပြီးတော့ ၃ခါရိုက်ထုတ်ပါတယ်။ abc က A ထဲမှာ ပထမအကြိမ် Loop အတွက်ရှိမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ ၊ def က ဒုတိယ loop ၊ xyz ကတော့ တတိယ loop မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ ခုနက ရေးခဲ့တဲ့ Bat File လေးကို နားလည်ပြီးတော့ Forr Loop ကို လည်း အခြေခံအနေနဲ့ နည်းနည်းလေး နားလည်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။
For Loop က Parameter တွေနဲ့ တွဲပြီးသုံးတတ်ရင်သုံးတတ်သလို Powerful ဖြစ်ပါတယ်။
for Loop ကို လေ့လာဖို့ နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုလောက်လုပ်ကြည့်ရအောင်။ နည်းနည်း ခက်တော့ခက်မယ်ဗျ. ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ကျနော် အပေါ်မှာ ရေးပြဖို့ ကျန်ခဲ့တာလေးတွေရှိနေလို့ပါ။ ကျနော် Parameter ကို define လုပ်တာနဲ့ Parameter တွေက ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ မပြောခဲ့ရလို့ပါ။ အောက်က ဟာလေးကို Notepad မှာ ရေးကြည့်လိုက်ပါ။
for %%a IN(%1 %2) do del %%a
ရေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ သူ့ကို testfor.bat နဲ့ Save လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဒီတိုင်းထားပါ။ Program ကို မ Run လိုက်ပါနဲ့။
Start>>Run>>cmd>> ထဲရောက်သွားရင် ခုနက ကျနော်တို့ ရေးခဲ့တဲ့ testfor.bat ရဲ့ လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလိုက်ပါ။ Path ပြောင်းတာတော့ ကျနော်လည်း အသေးစိတ်မပြောပြတော့ဘူးနော်။ cd Command နဲ့ ပြောင်းတယ်ဆိုတာ အားလုံး သိပြီသားဖြစ်မှာပါ။
အဲဒီ့ လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းပြီးရင်တော့ ခုနက save ခဲ့တဲ့ testfor.bat ကို ခေါ်လိုက်ပါ ပြီးရင် ဖျက်ချင်တဲ့ file name ကို အဲဒီ့နောက်မှာထပ်ရေးပါ။
စာနဲ့ရေးတာ နားမလည်မှာဆိုးလို့ ကျနော် ဥပမာ ရေးပြလိုက်ပါမယ်။
cmd ထဲရောက်နေပြီး လမ်းကြောင်းလည်းပြောင်းပြီးသားဆိုပါက
မိမိ path လမ်းကြောင်း>testfor.bat a.txt b.txt
အဲဒီ့မှာ a.txt နဲ့ b.txt ဆိုတာက ကျနော်ဖျက်ချင်တဲ့ ဖိုင်နာမည်ပါ။ အဲဒီ့နေရာမှာ ကြိုက်တာထားလို့ရပါတယ်။ *.txt , *.pdf အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ အဲလိုရိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ရင်တော့ အဲဒီ့ file Name တွေပျက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်ကဥပမာလေးကတော့ For ကို Parameter တွေနဲ့ တွဲသုံးပြီးတော့ ဘယ်လောက် အသုံးတဲ့တယ်ဆိုတာကို သက်သေပြလိုက်တာပါ။
စာဖတ်သူတို့ အဆင်ပြေရင်ပြေသလို ဥာဏ်ရှိရင် ရှိသလို ချဲ့ထွင်ရေးနိုင်ကြပါတယ်။ကဲဒါဆို ကျနော် ခုနက ဥပမာ ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ လုပ်နည်းကို ရှင်းပြပြီးပြီ ဖြစ်လို့ Code တွေကို နည်းနည်း ပြန်ရှင်းပြပါမယ်။ မှတ်မိသွားအောင်ပေါ့။
4 လိုင်းမြောက်က echo %1 %2 ဆိုတာကတော့ For ထဲမှာ ကြေငြာထားတဲ့aဆိုတဲ့ Variable ထဲမှာ၇ှိမယ့် %1 နဲ့ %2 ထဲက Variable ကို ရိုက်ထုတ်တာပါ။
ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကျနော်တို့ဟာ ခုန Run ကြည့်တုန်းလိုမျိုး I am going to delete the following files: ဆိုတဲ့ စာသားအောက်မှာ ကျနော်တို့ ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ a.txt နဲ့ b.txt ကို ဖော်ပြပေးတာပါ။ OK?
၅ လိုင်းမြောက်မှာတော့ ပုံမှန် echo နောက်မှာ . လေးကို ထည့်ထားတာပါ။ ထိုသို့ထည့်ထားခြင်းအားဖြင့် တစ်လိုင်းခြားတဲ့ ကိစ္စကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ (အရင်က မပြောခဲ့ရလို့ အခုမှ ဖြည့်ပြောပေးတာပါ)
ဒါဆို for looping ကို ရေးထားတဲ့ နေရာကို ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။
ဖတ်ရ ခက်မှာ စိုးလို့ အပေါ်ကဥပမာထဲက For Loop အတွက် Code ကို ပြန်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် Program လေးလဲ Run ပြီးသားဆိုတော့ For Loop ထဲက လုပ်ငန်းတွေကိုနည်းနည်းတော့ သဘောပေါက်နေပြီထင်ပါတယ်။
ပိုပြီးတော့ နားလည်သွားအောင် ကျနော် နည်းနည်း လျှာရှည်လိုက်ပါ့မယ်။
%%a ဆိုပြီးတော့aဆိုတဲ့ Variable လေးတစ်ခုကြေငြာပါတယ်။
အဲဒီ့aထဲကို IN(%1 %2) ဆိုပြီးတော့aထဲကို 1 နဲ့2ကို ထည့်ထား သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ပြီးတော့ do ဆိုပြီး ခုနကaထဲမှာ ရောက်နေမယ့် တန်ဖိုး ၂ ခုကို del ဆိုတဲ့ command နဲ့ ဖျက်လိုက်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ For နဲ့ ပါတ်သက်လို့ ကျနော် ရှင်းပြနိုင်တာ ဒီလောက်ပါဘဲ။ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Looping တွေနဲ့ ပြီးပြည့်စုံသော bat တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး PC ကို အပြည့်အ၀ အန္တာရာယ် အကြီးအကျယ်ပေးလို့ရတဲ့ အတွက် အများကြီးမရှင်းပြတော့ပါဘူး။
နောက်နေ့တွေမှာ IF နဲ့ ပါတ်သက်လို့ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပေးပါ့မယ်။ အဲဒါပြီးရင်တော့ Bat အကြောင်းလည်း အခြေခံအနေနဲ့ တော်တော် စုံသွားလောက်ပြီဖြစ်လို့ ကျနော့် TuT ကို IF Statement အကြောင်းနဲ့ ပိတ်မယ်ဆိုတာ ကြိုတင် ပြောကြားပါရစေ။ ဒီ့ထက် bat အကြောင်းအသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ bat နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ site တစ်ချို့ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ မပါလာလို့ ကျနော်ပြန်ရှာပြီး နောက်နေ့မှာ တင်ပေးပါ့မယ်။
စာဖတ်သူတို့ အနေနဲ့ bat ကို အသုံးပြုပြီး System တစ်ခုကို ကောင်းကောင်း ထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတာကို အနည်းငယ်သိသွားပြီဖြစ်လို့ အကယ်လို့များ ဒီ့ထက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိချင်ရင်တော့ စာများများဖတ်ပါ.. Windows Command တွေကို ရှာဖွေပါ။ DoS ခေတ်ကို ခဏ ပြန်သွားပါ လို့တိုက်တွန်းပါရစေ။ (ကျနော်ကတော့ ဒါနဲ့ ပါတ်သက်လို့ စိတ်မ၀င်စားတော့လို့ ဆက်မလေ့လာတော့ဘူးဗျို့။ အခုတောင် ရေးလက်စမို့လို့ ၊ ပြန်စဉ်းစားရတာ တော်တော် ဦးနှောက်ခြောက်တယ်။ )
စောင့်ဆိုင်းဖတ်ရှုပေးသော သူများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 7:51 AM